जनयुद्धको हेडक्वार्टर : ९ जना शहीद भए, धेरैले छाडे प्रचण्डको साथ यस्ताे छ, विभिन्न कालखण्डमा प्रचण्डको साथ छाडेका जनयुद्धका कमाण्डरहरुको विवरण
जनभाव शनिबार, पुस १०, २०७८
काठमाडाैं । नेकपा माओवादीले ०५२ साल फागुन १ गते रातिदेखि सशस्त्र जनयुद्ध थाल्यो । त्यसबेला प्रचण्डको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो । जनयुद्धमा होमिनुअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरु निकै भावुक देखिन्थे । बन्दुक बोकेर हिँडिसकेपछि अब कोको बाँचिएला, फेरि भेट होला कि नहोला भन्दै उनीहरुले सामूहिक तस्बिर खिचाए । तर, त्यो तस्बिर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
संयोगवस् माओवादीको हेडक्वार्टरमा खासै ठूलो क्षति भएन । १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा ८ जना केन्द्रीय सदस्यले बलिदानी दिए । एकजना केन्द्रीय सदस्य गिरफ्तारपछि बेपत्ता पारिए । अन्ततः शान्ति प्रक्रियामा आउँदा अध्यक्ष प्रचण्डसहित विद्रोही माओवादीका प्रायः सबैजसो​जनयुद्धकालीन केन्द्रीय सदस्यहरु ज्यान जोगाएर काठमाडौं उत्रन सफल भए ।
सामूहिक फोटो खिचेर मृत्युको सुरुङमा हिँडेका केन्द्रीय नेताहरुमध्ये सुरेश वाग्ले, रीतबहादुर खड्का, नेपबहादुर केसी, शेरमान कुँवर, मोहनचन्द्र गौतम र किमबहादुर थापा राज्य पक्षबाट मारिए । केन्द्रीय सल्लाहकार तेजमान घर्तीले कपिलवस्तुमा आत्मघाती ग्रिनेट विस्फोटमा परी ज्यान गुमाए । केन्द्रीय नेता यानप्रसाद गौतम (आलोक) पार्टीको आन्तरिक हिरासतमा रहेका बेला सेनाद्वारा मारिए । केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपाने गिरफ्तारपछि बेपत्ता पारिए । अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्य न्यौपानेको खुट खबर छैन । न सास भेटियो, न लास ।
माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरुको विवरण हेर्दा ०५२ सालमा जनयुद्ध थाल्नुअघि केन्द्रीय कमिटीमा १९ जना थिए । ०५५ सालको चौथो विस्तारित बैठकबाट ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो । त्यसबीचमा धेरै नेताहरु बढुवा भएर केन्द्रीय कमिटीमा आइपुगे ।
जनयुद्ध हाँक्ने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका ३५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये १६ जना अहिले पनि प्रचण्डकै साथमा छन् । १५ जनाले प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी छाडिसकेका छन् । दुईजना उपराष्ट्रपति र सभामुखको भूमिकामा छन् भने एकजना पोष्टबहादुर बोगटीको हृदयाघातका कारण निधन भइसकेको छ ।
०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध शुरु हुनेबेला केन्द्रीय कमिटीमा रहेका १९ नेता यी थिए–
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, स्व.पोष्टबहादुर बोगटी, रामबहादुर थापा बादल, सीपी गजुरेल, हरिभक्त कँडेल, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, मातृका यादव, नारायणप्रसाद शर्मा पौडेल, अग्निप्रसाद सापकोटा, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लोकेन्द्र विष्ट, स्व.यानप्रसाद गौतम, दण्डपाणि न्यौपाने (वेपत्ता), दिनेश शर्मा र फणीन्द्र आचार्य ।
जनयुद्धकै क्रममा विभिन्न समयमा केन्द्रीय कमिटीमा नेताहरुको बढुवा भयो । खास गरी ०५५ सालमा चौथो विस्तारित बैठकबाट विप्लव, वर्षमान, जनार्दन लगायत धेरै युवा नेताहरु केन्द्रीय सदस्यमा एकसाथ बढुवा भए । त्यसपछि ०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा थप नेताहरु बढुवा भए ।
जनयुद्धकालमा यसरी बढुवा भएका केही चर्चित केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली यस्तो छ–
हेमन्तप्रकाश ओली (२०५३), कृष्णबहादुर महरा (२०५३), नेत्रविक्रम चन्द विप्लव (२०५५), हितमान शाक्य (२०५५ ), चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव (२०५५), वर्षमान पुन (२०५५), जनार्दन शर्मा (२०५५), शक्तिबहादुर बस्नेत (२०५५), मणि थापा(२०५५), रवीन्द्र श्रेष्ठ (२०५५), देवेन्द्र पौडेल (२०५७), हिसिला यमी (२०५७), राम कार्की, धर्मेन्द्र बास्तोला (२०५७), हितराज पाण्डे (२०५७), नन्दकिशोर पुन पासाङ (२०५७), कुलबहादुर केसी (२०५७), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (२०५७), दीनानाथ शर्मा (२०५७) लेखराज भट्ट (२०५७), इन्द्रमोहन सिग्देल (२०५९) र गोपाल किराती (२०६०), प्रभु साह आदि ।
जनयुद्धकालीन ३५ केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये १८ बढीले प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी छाडिसकेका छन् । केही नेताहरु मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा छन् भने केही विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टीमा गएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीलगायतका नेताहरु जनता समाजवादी पार्टीमा छन् ।
विभिन्न कालखण्डमा प्रचण्डको साथ छाडेका जनयुद्धका कमाण्डरहरुको विवरण यस्तो छ–
मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, गोपाल किराती, लेखराज भट्ट, लोकेन्द्र विष्ट, इन्द्रमोहन सिग्देल, हेमन्तप्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बास्तोला, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, हिसिला यमी, सीपी गजुरेल र हरिभक्त कँडेल, प्रभु साह आदि ।
०५८ सालमा वार्ता भंग भएर भूमिगत भएसँगै ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो । हाल एमालेमा लागेका प्रभु साह त्यही लटमा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । त्यो १९ सदस्यीय कमिटीका धेरै नेताहरु तितर–वितर भइसकेको अवस्था छ ।
माओवादीले ०५८ सालपछि केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउँदै लग्यो । १९ बाट, ३५ बनाइयो । ३५ बाट ९९ सदस्यीय बनाइयो । १२४ सदस्यीय, डेढ सय सदस्यीय हुँदै एमालेमा एकता हुनुपूर्व ४ हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको अभ्यास पनि माओवादीमा भयो । हालको प्रस्तावित विधानमा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कमिटी ठूलो बनेसँगै पार्टी चोइटिने क्रम पनि जारी नै रह्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मूलप्रवाह छाडेर हिँडेका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीमा फर्काउने उद्घोष गर्दै आएका छन् । तर, व्यवहारतः यो कति सम्भव होला, हेर्न बाँकी छ । साभार राताेपाटी डटकमबाट
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १०, २०७८, १८:०४:००